မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနည်းေ နတာ ဘာကြောင့် လဲ? ( ရုပ် / သံ) – Let Pan Daily
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနည်းေ နတာ ဘာကြောင့် လဲ? ( ရုပ် / သံ)
မြန်မာနို င်ငံမှာ ဒီကနေ့အထိ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၂၃၃ နဲ့ သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိပြီး ကုသမှုခံယူပြီး ရောဂါပိုးကင်းစင်ကာ ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၁၄၅ ဦးရှိတယ်လို့ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ မိုင် ၁၃ဝဝ ကျော် နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်စပ်နေသလို မြန်မာ နဲ့ တရုတ်နယ်ခြားမှာ တရားမဝင်ဖြတ်သန်းဝင်ထွက်လို့ ရတဲ့နေရာတွေလည်း အများကြီးရှိတဲ့အပြင် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ ကာကွယ်ကုသရေးမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် သေဆုံးမှုတွေအများအပြားရှိနိုင်တယ်လို့ ပြည်တွင်းပြည်ပက စိုးရိမ် ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိတော့ အခြေအနေတွေက အတော် တည်ငြိမ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ပြည်သူတွေက တိုင်းပြည် ရဲ့ ဆင်းရဲမှုကို သိကြတဲ့အတွက် ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အတူ တတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်ကူညီကြလို့ပါပဲလို့ ဝေဖန်သူတွေရှိသလို အစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုသူတွေ လည်း ရှိပါတယ်။
လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူ ဒေါက်တာ စစ်နိုင်က ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ အကျိုးပဲလို့ ဝေဖန်ပြော ကြားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမား အယ်ဒီတာ ကိုမျိုးမြင့်ညိမ်း ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ နိုးကြားတက်ကြွမှုဟာ အဓိက အင်အား ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ အခုလိုအခြေအနေမှာ အားရကျေနပ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေထိုင်လို့ မဖြစ်ဘူးလို့ ဒေါက်တာစစ်နိုင်က သတိပေးပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ် ကနေ တခြားကမ္ဘာတလွှားက ဆိုးဝါးတဲ့နိုင်ငံတွေ လို သေဆုံးမှု မများဘဲ လွတ်မြောက်ရေးဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အင်အား ပေါ်မှာ အဓိက မူတည်နေတယ်ဆိုတာကို အားလုံးက အသိအမှတ် ပြုရမှာပါပဲ။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ လိုက်နာ ခြင်းဖြင့်သာ ဒီ ကပ်ရောဂါဆိုးကို ကျော်လွှားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမဖွေဈသူ အ တှကျ သောကျရခေပျပေးဖို့ အိမျ အပွငျ အထှကျ မှာ ပဈခံ လိုကျ ရတဲ့ (၁၃) နှဈအရှယျ ကလေးငယျ မောငျထှနျးထှနျးအောငျ
“အစိုးရိမ် ရဆုံး အခြေအနေကို ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖားကန့်ဒေသက မူးယစ် ဆေးဝါး”